Obi ụtọ na-atọ ụtọ: Kawaii Jump bụ egwuregwu mara mma nke ị ga-ezute Miimos | Gam akporosis
Obi ụtọ na-atọ ụtọ: Kawaii Jump ma ọ bụ 'mara mma' nke emere na egwuregwu nke ọtụtụ Miimos
A na-enwekarị egwuregwu ụfọdụ na-adabere na atụmatụ agba nke na-agakarị ndo dị ka Hello Kitty, nwere ike ịme ọtụtụ ụdị egwuregwu site na nghọta anya ha doro anya nke na-agbanye site na oge mbụ. N'ụzọ ezi uche, ndị na-ahọrọ Oku ọrụ ma ọ bụ agha, ọ ka mma ịgbaso isiokwu dị n'okpuru n'ihi na egwuregwu a nwere ike ịkpọ ya "geek", ọ bụ ezie na ọ nwere amara ya ma ọ bụrụ na ị nwere ike ile ya anya karịa ụmụaka na enyi. Ikekwe ncheta m enweghị ike ịdọrọ onwe m gaa na nke a tụbara n'ụdị nke nke m nwere ugbu a, yabụ anyị ga-ezute Obi ụtọ Obi: Kawaii Jump ma ọ bụ ihe a ga-akpọ dị ka Bears na-ahụ n'anya gbanwere anu ulo akpọ Miimos.
Obi ụtọ na-atọ ụtọ: Kawaii Jump bụ otu n'ime iri abụọ ikpeazụ maka Egwuregwu Google Play Indies na Europe, ya mere ana m ekwu okwu banyere ogo egwuregwu vidio a nwere n'onwe ya, ọ bụ ezie na ọ metụrụ otu ụdị obere pụrụ iche na visual na na nsonaazụ ụda kachasị mmaỌ na-egwu egwuregwu ahụ nke ọma na aces n'aka ya, ya mere kpachara anya, n'ihi na ị nwere ike ịdaba na netwọkụ ha ọbụlagodi na ị bụ ndị mgbaasị kachasị mma na Call of Duty. Obi ụtọ Hop bụ ihe na-enweghị ngwụcha ngwụcha nke na - adị mfe njikwa, mana imata ya nwere ihe. Na jumps otu akụkụ ma ọ bụ ọzọ anyị ga-aga na-etinye postocks nke Froggy na Miimos na dị iche iche nyiwe ga-enwe dị iche iche na nzube, otú e nwere kit nke gameplay ajụjụ nke egwuregwu a.
1 Nyere ndị Miimos aka na njem ọhụụ ọhụrụ ha nwere
2 Ihe karịrị 70 Miimos na-echere gị
Nyere ndị Miimos aka na njem ọhụụ ọhụrụ ha nwere
Platonic Games enwewo ike ibipụta egwuregwu a na Storelọ Ahịa Play iji merie ndị ọka ikpe kpebiri nke bụ ndepụta nke egwuregwu egwuregwu ikpeazụ nke abụọ nke egwuregwu Google Play Indie na Europe. Egwuregwu vidio na ọ na-eji nke ahụ pastel na pink anya iji tinye onwe anyị n'ihu ụfọdụ Miimos dị mma ma na-atọ ọchị ka anyị wee nwee ike iburu ha gaa na mbara igwe site na hopper pụrụ iche maka ọtụtụ omume ọma anyị ga-aza.
Anyị ga-aga na-awụli elu mgbe ọzọ na ndị ahụ nyiwe nke nwere ike igbanwe igwe ojii nke na-apụ n'anya tupu nzọụkwụ anyị ma ọ bụ ndị ọzọ na-adaba na obere sekọnd, yabụ anyị ga-adị ngwa iji gbagoo nke na-esote. Anyị agaghị enwe ike iguzo ọtọ n'oge ọ bụla, ebe ọ bụ na enwere ogwe ike na-agba ume ruo mgbe anyị rutere n'elu obere ikpo okwu ọzọ. Nke a bụ Obi Hotọ Obi ptọ: Kawaii Jump gameplay nke ị ga-enweta na ya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị chere na ọ gaghị.
Ihe karịrị 70 Miimos na-echere gị
Ndị Miimos bụ ezigbo anu ulo na-eguzosi ike n'ihe. Mgbe ha hụrụ gị, ha ga - enwe ezigbo ọbụbụenyi, ha ga - echedo gị wee jiri obi ha niile hụ gị n'anya, ma ha ga - ewetara gị ọchichọ. Nke a bụ otu ọmụmụ ihe ahụ si kọwaa ụfọdụ anụ ụlọ ọtụtụ ndị egwuregwu n'egwuregwu ụwa niile na-ahụ n'anya maka ụdị omume enyi ha.
ya ihe karịrị 70 Miimos ndị na-echere gị dịka Ewu, Alpacornio, Chicken, Cat na ọtụtụ ndị ọzọ. Ya mere jikere maka ihe karịrị 20 ịrịba ndapụta dị ka swiiti Nrọ ma ọ bụ Ogige Ubi nakwa dị ka egwuregwu ga-emelitere na pụrụ iche n'isiokwu maka Ista, Halloween na ndị ọzọ.
Obi ụtọ na-atọ ụtọ: Kawaii Jump dị n'efu site na Playlọ Ahịa Google na micropayments ndị doro anya na ngwa ahụ.
Egwuregwu vidio nke pụtara ìhè maka ọmịiko nke ndị odide ya, agba ndị mara mma na nke ahụ egwu na nsonaazụ ụda Ha na-ada ụda "awwww," dị ka ị na-ele nwamba mara mma na-egwu bọl nke yarn. Nke a bụ ihe Obi Happytọ Obi astọ na-enye dị ka ihe ngosi.
Hop obi ụtọ: Kawaii Jump
Lee ka o si maa mma
Egwuregwu dị mfe nke nko
Ọ bụghị maka ndị egwuregwu niile
Developer: Egwuregwu Platon
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Obi ụtọ na-atọ ụtọ: Kawaii Jump ma ọ bụ 'mara mma' nke emere na egwuregwu nke ọtụtụ Miimos
Otu esi enweta foto clipboard na gam akporo
Yobot Run bụ ezigbo ọmarịcha ndị na-agba ọsọ na-agba ọsọ nwere ọkwa ejiri aka mee